I-Mica Powder, I-Mica Flake, I-Chips Yemibala - I-Lingshou
I-Mica flakes isuselwa eqenjini lamaminerali we-sheet silrate, abizwa nge-mica, ahlanganisa iMuscovite, i-phlogopite, i-biotite nabanye. Ngenqubo yokukhiqiza kakhulu kwezobuchwepheshe, amaminerali e-mica ahlukaniswa abe yizicucwana ezinjengezeshidi, ahlukaniswe abe amaqembu anemibala yemvelo futhi aqhekeke phansi abe osayizi bama-flakes standardized. Lama-flakes ayingqayizivele anikezela i-luster yemvelo yensimbi engenakutholakala namanye amaminerali anjiniyela. Bangabalingani abahle kakhulu ekukhiqizeni upende we-lacquer namatshe kanye nezinto zokuhlobisa zesitayela eziqinile zengubo yangaphandle nengaphakathi.
Ukucaciswa okuyinhloko kwe-Mica Powder yenkampani yethu: i-mesh engama-20, ama-mesh angama-40, ama-mesh angama-60, ama-80 mesh, ama-mesh angama-200, ama-mesh angama-325, ama-400 mesh, ama-mesh angama-500, ama-mesh angama-800, ama-mesh angama-800, i-mesh eyi-1000, i-mesh eyi-1250 nama-mesh angama-2500. Kungenziwa futhi ngezifiso. I-Mica powder luhlobo lwamaminerali angenazinsimbi, aqukethe izinhlobo zezithako ezinama-49% SiO2 nama-30% Al2O3. I-Mica inezindawo ezinhle kakhulu zokuqina nokuqina. Kuluhlobo lokungezelela kwe-premium yezakhiwo zokufakelwa, ukumelana okushisa okuphezulu, ukumelana kwe-acid ne-alkali, ukumelana nokugqwala kanye nokunamathela okunamandla, njll. Kusetshenziswa kabanzi ezintweni ezisebenza ngogesi, induku yensimbi, irabha, ipulasitiki, iphepha, amapulasitiki, i-coating, upende, ubumba, izimonyo nezinto zokwakha ezintsha neminye imboni. Ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe, kuzofakwa izicelo eziningi ezintsha.
I-Vermiculite luhlobo lwamaminerali agqinsiwe aqukethe i-Mg futhi degenerates okwesibili kusuka kuma-hydrate aluminium siltures. Ngokuvamile kwakhiwa ngokushintsha kwezulu noma i-hydrothermal change of biotite noma phlogopite. Ihlukaniswe ngezigaba, i-vermiculite ingahlukaniswa nge-vermiculite engafakwanga futhi i-vermiculite enwetshiwe. Ihlukaniswe ngombala, ingahlukaniswa ngegolide nesiliva (uphondo lwendlovu). I-Vermiculite inezindawo ezinhle kakhulu njengokufakelwa kokushisa, ukumelana nokubanda, ama-anti-bacteria, ukuvimbela umlilo, ukumuncwa kwamanzi kanye nokufakwa komsindo, njll. Uma kubhakwa imizuzu eyi-0,5 ~ 1.0 ngaphansi kwe-800 ~ 1000 ℃, ivolumu yayo ingandiswa ngokushesha ngo-8 kuya ku-15. izikhathi, kuze kube izikhathi ezingama-30, ngombala oguqulwe waba yigolide noma isiliva, ukhiqiza i-vermiculite ekhulisiwe esetshenziswe ngombala engeyona i-acid futhi ingekho kahle ekusebenzeni kukagesi.
I-Col Flakes, nayo evame ukubizwa ngokuthi yichotho, ama-chip, ama-flake noma izingcezu zamagobolondo njll .. Kuyinto ethathwe kumaminerali angenasici. Ngenqubo yokukhiqiza ngobuchwepheshe, yakha uhlobo lwezinto ezinhlobonhlobo ze-hexagonal zeshidi ezinjenge sheet ezenziwe kumikhiqizo ehlotshisiwe esetshenziswa emapulasitiki nasezintweni zenjoloba ngokwelashwa kwesiteji esiningi nokwelashwa ngamakhemikhali. Lama-flakes ayingqayizivele anikezela i-luster yemvelo yensimbi kanye nokugqama kombala obuhle kukhombisa kahle umphumela wephethini ye-granite yemvelo nemabula. Lo mphumela wokubuka emuva kwesimo awunakwenziwa ngezinye izinto. Ngakho-ke ama-color flakes asiza ukuthuthukisa ikhwalithi yemikhiqizo yakho ukuthi ibe nokuncintisana okuningi emakethe yakho.
I-Lingshou County Xinfa Mineral Co, Ltd, eyasungulwa ngo-Ephreli, 2002, itholakala eLujiawa Industrial Park, eLingshou County, Hebei, China. Singumkhiqizi ochwepheshe we-super-fine mica powder, amashidi anemibala, ama-flake ama-composite, ama-vermiculite njll ngomthamo wokukhiqiza waminyaka yonke ongaphezu kwamathani ayi-10,000. Inkampani yethu ihlanganisa indawo engabalelwa ku-30,000㎡, lapho indawo yokwakha ithatha khona i-10,000㎡ kanye nesakhiwo samahhovisi esingu-1,200㎡. Ngo-2003, inkampani yethu yakalwa njengo “Enterprise of Observation contract & Keeping Promise” nguHebei Provincial Bureau of Industry and Commerce;
(1) Umphumela weBarriers kwifilimu yokupenda, ifilayidi engenangqondo izokwakha ilungiselelo elihambisanayo, ngaleyo ndlela ivimbele ngokunamandla ukungena kwamanzi nezinye izinto ezonakalisayo, futhi uma usebenzisa i-mica powder esezingeni eliphakeme (isilinganiso sobukhulu obukhulu bungama-50, khetha) ...
(1) Ukushintsha i-Optical Properties of Plastics Mica chips kungabonakalisa futhi kukhanye imisebe ye-infrared kanye nokuthatha futhi kuvikele i-UV, njll. Ngakho-ke, uma wengeza ama-mica asezingeni eliphakeme emvula kumafilimu ezolimo, kuzoba nzima ukukhanya ukuphuma. ngemuva kokungena ku ...
Amathuluzi: Amathuluzi alandelayo kufanele abe khona ngaphambi kokwakhiwa. Zijwayelekile kakhulu futhi ungazithola ezitolo zokwakha noma ezitolo zehardware. Isibhamu se-Roller Brush Spray ...